कसरत - प्राचीन खेल लचीलापन, शक्ति र आन्दोलनहरु को राम्रो समन्वय आवश्यक छ। नियमित प्रशिक्षण खेलाडीहरूलाई सबै मांसपेशी समूहहरु को विकास मा केन्द्रित। विशेष ध्यान उत्पादन जो र मुद्रा राख्छ, सबै आन्दोलनहरु र अभ्यास मा भाग प्रेस, दिइएको छ। कसरी gymnasts , प्रेस स्विंग मार सक्षम, र सोही समयमा जो कोहीले प्रेरित गर्न। दैनिक प्रशिक्षण सुविधाहरु फरक अभ्यास को एक किसिम, असह्य सिर्फ एक प्रशंसक समावेश गर्नुहोस्।
किन रक प्रेस gymnasts?
धेरै gymnasts अविश्वसनीय लचीलापन, stretching, प्रकाश र चपलता सम्बन्धित छन्। यस्तो धारणा उजागर गर्दै छन् र उनको प्रशिक्षण, कूदता, विभाजन र मिलेर जिम्न्यास्टिक। यो चित्र वास्तविकता अनुरूप छैन। दैनिक खेल खेलाडीहरूलाई समावेश जो भारी भार, गर्न subjected छन् प्रशिक्षण मिडिया gymnasts। तिनीहरू किन स्विंग गर्नुपर्छ पेट मांसपेशीमा?
खेल मा उपलब्धिहरू लागि आफ्नो समूह बिना महत्त्वपूर्ण तागत र मांसपेशी धीरज छन्।
सही प्रकारका र चिल्लो असर, निहित अनुग्रह र gymnasts को अनुरूप प्रदान गर्दछ जो थिच्नुहोस्।
कक्षाहरू धीरज बल कौशल र अन्य उपयोगी भौतिक गुण विकास।
नियमित व्यायाम प्रदर्शन गर्न योगदान।
गहन पाठ्यक्रम खेलाडीहरूलाई को लचीलापन लागि जिम्मेवार छन् जो जोइन्टहरूमा, को गतिशीलता प्रदान गर्नुहोस्।
धेरै ढलान, खोल्दै र घुमा, को व्यायाम कार्यक्रम समावेश छन्, प्रेस प्रदान गरिन्छ।
को पेट पर्खाल विकसित मांसपेशीमा चोट देखि महिला खेलाडीहरूलाई आन्तरिक अङ्गहरू सुरक्षित राख्दछ।
दैनिक गतिविधिहरु समर्थन र हृदय र श्वसन प्रणाली बलियो बनाउन।
अन्तमा, एक व्यापक भौतिक विकास musculoskeletal प्रणाली र सामान्य स्वास्थ्य मा लाभकारी प्रभाव बलियो बनाउँछ।
प्रशिक्षण समयमा चोट जोगिन र तिनीहरूलाई अझ प्रभावकारी बनाउन गर्न, यो निश्चित प्रविधि पालन गर्न आवश्यक छ। त्यो gymnasts सहित सबै खेलाडीहरूलाई, पछि लागे। प्रेस व्यायाम, यसको प्रकार बाबजुद, धेरै नियम अनुसार गरिन्छ।
मापन। आन्दोलनहरु jerks बिना, चिल्लो हुनुपर्छ। अन्यथा सम्भव चोट, तनाव वा मांसपेशी बिच्छेद सम्म।
उचित साँस। दक्ष लोड वितरण र नियन्त्रण हार्टबिट लागि आवश्यकता। प्रेरणा मा - तपाईं Exhale रूपमा आराम प्रयास गरेको छ।
गति को संयोजन। व्यायाम को प्रकारको गरिन्छ के बिना यो ढिलो र छिटो कार्यान्वयन alternated गर्नुपर्छ। दोस्रो मामला मा, मांसपेशीमा अधिकतम लोड प्राप्त र ढिलो काम समयमा प्राप्त परिणाम ठीक।
लोड विनियमन। प्रेस मा एक अत्यधिक लोड hernias को गठन गर्न सक्छ। तसर्थ, बाटो gymnasts प्रेस, निर्धारित र अत्यधिक लोड रोक्छ जो एक पेशेवर कोच, द्वारा शासित स्विंग।
ड्रिल प्रेस, को supine स्थिति प्रदर्शन, बाँकी मांसपेशी तनाव वहन छैन। यस कारण लागि, कमर खेलाडीहरूलाई कुन तपाईं केवल पेट पर्खाल तालिम गर्न अनुमति दिन्छ र चाक र खुट्टा समावेश गर्दैन तल्ला, गर्न थिचिएको।
को rectus abdominis लागि अभ्यास
तिनीहरूले माथिबाट तल गर्ने पेट साथ स्थित, र पेट पर्खाल सबैभन्दा शक्तिशाली छौं। तिनीहरूले प्रेस को "घन" को प्रभाव सिर्जना गर्नुहोस्। तपाईं gymnasts प्रेस स्विंग कसरी ध्यान भने, तपाईं rectus मांसपेशी प्रशिक्षण समयमा वृद्धि ध्यान प्राप्त गरेको छ याद हुनेछ।
"तह"। आफ्नो टाउको माथि आफ्नो हात उठाउनु आफ्नो पछाडि झूठ। को औंलाहरु खुट्टा छोयो भनेर शरीर र खुट्टा साथ उठाएर छन्। यो स्थितिमा 100 सेकेन्ड को लागि रहनुहोस्।
"नाउ"। सुत्न, हात टाउको माथि राखिनेछ। खुट्टा र शरीर भुइँमा माथि 30-45 डिग्री गर्न खडा छन्। स्थिति 10 सेकेन्ड को लागि आयोजित छ। त्यसपछि आफ्नो पेट मा एक तख्तापलट प्रदर्शन। हतियार र खुट्टा फेरि सतह माथि बन्द भताभुङ्ग। 5-6 पटक दोहोरिन।
पट्टी मा। को crossbar बुझ्दा, आफ्नो हात मा सुत्छन्। दायाँ कोण आफ्नो खुट्टा उठाउनु, आफ्नो छाती गर्न थिचिएको। फेरि लम्ब, शरीर गर्न सीधा मूल स्थिति लिन। 10 पटक दोहोर्याइएको थियो।
अप्रत्यक्ष र transverse मांसपेशीमा
तिनीहरूले corset, herpes कमर र नितम्ब एक प्रकारको छन्। यी मांसपेशीमा ढलान र परिक्रमा को संभावना विनियमित। कसरी प्रशिक्षण गर्न प्रेस gymnasts?
स्थिति सुरू - पछाडि, आफ्नो टाउको माथि आफ्नो काखमा unfolded। शरीर लिफ्ट, बायाँ गोडा आफ्नो दायाँ कुहिनो पुग्न। 20 पटक बायाँ-हात समान दोहोर्याउनुहोस्।
आफ्नो पछाडि ढाँट्छन्। खुट्टा को घुँडा, लिफ्ट मा बाङ्गो, श्रोणि उठाने र फिर्ता तल्ला बन्द कम। Serried खुट्टा, एक हात पसार्नु प्राथमिक स्थिति लिन। अन्य काँध गर्न निर्देशन परिवर्तन। 10 पटक चलाउनुहोस्।
स्थिति - आफ्नो पक्षमा झूट। एक हात टाउको मा खण्डमा, अन्य शरीर साथ बाहिर फैलयो। लिएको सीधा खुट्टा पनि upbeat कुहिनो तिर उठाएर। 10 पटक दोहोर्याइएको थियो। फेरि माथि रोल।
तल्लो मांसपेशीमा लागि अभ्यास
यो समूह rectus abdominis को एक विस्तार छ। अन्तरनिहित मांसपेशीमा सामान्यतया कमजोर र खराब कारण जीव को संरचना प्राकृतिक सुविधा, विशेष गरी महिला विकास, छन्। लोड को स्तर दिइएको र कसरी gymnasts अन्तरनिहित मांसपेशीमा विकास, तपाईंले "चाल" को शारीरिक सुविधाको लागि प्रेस स्विंग र सिधै सपाट पेट को मालिक बन्न।
आफ्नो पछाडि ढाँट्छन्। 45 डिग्री को एक कोण मा तल्ला सीधा खुट्टा बन्द। , 10 सेकेन्ड को लागि स्थिति रहन डूबा। 15 पटक दोहोरिन।
को खतरा स्थिति लिनुहोस्। एकांतर आफ्नो छाती आफ्नो घुँडा 20 पटक पुल।
को crossbar पर्खनुहोस्। आफ्नो खुट्टा अधिकार कोण मा 15 पटक उचाल्न।
युवा gymnasts प्रशिक्षण
बालिका लागि त्यहाँ खातामा आफ्नो शरीर विज्ञान को विशेषताहरु लिन्छ कि छुट्टै कार्यक्रम छ। 12 वर्ष पुरानो Schoolgirls उच्च शक्ति छ। यस कारण, तिनीहरूलाई लागि लोड सजिलै fatigued छन् भनेर पन्ध्र-खेलाडीहरूलाई संग तुलना, वृद्धि। पेट व्यायाम सानो gymnasts बराबर उत्साह र समर्पण संग प्रदर्शन। प्रशिक्षण पेट को सबै मांसपेशीमा समावेश र प्रभावकारी तिनीहरूलाई विकास।
आफ्नो पछाडि ढाँट्छन्। समूहीकृत बैठक, सुरु स्थिति लिन। छिटो 20 पटक चलाउनुहोस्।
आफ्नो बेल्ट मा एक पीठ मा बस्न, खुट्टा लक, हात। पछाडि झुक्नुहोस् फिर्ता जानुहोस्। 40 पटक चलाउनुहोस्।
आफ्नो पछाडि ढाँट्छन्। तल्ला सीधा खुट्टा बन्द, कम टाउको बाहिर पुग्न। 20 पटक दोहोरिन।
को gymnasts लागि अभ्यास को सेट व्यावसायिक खेलाडीहरूलाई लागि डिजाइन गरिएको छ र सजिलो व्यायाम को सरल प्रेमीहरूको लागि डिजाइन गरिएको छैन। प्रशिक्षण समयमा पुनरावृत्तिकोसङ्ख्या र दृष्टिकोण संख्या व्यक्तिगत समायोजित।
र्याजान - जिमहरू र आफ्नो विशेषताहरु
नेतृत्व प्रविधी: ट्रंक हुर्काउन
एक सपाट पेट र लोचदार कसरी बनाउने बारे एउटा लेख
रगत परीक्षण सामान्य, यसको मूल्य के हो
प्रकृति अमेरिका, वनस्पति र जीव
भ्रम के छ? चरम अन्योल, असजिलोपन, भावना को एक राज्य